कसरी देखिने स्लिम ? यी ट्रिक अपनाउनुस्::Independent News Portal from Nepal.
कसरी देखिने स्लिम ? यी ट्रिक अपनाउनुस्
लुगा त थरीथरीको लगाइन्छ, तर आफैलाई सुहाएको जस्तो लाग्दैन । ज्यान भद्दा भएर हो वा लुगा नमिलेर ? भेउ पाउन सकिदैन ।
आफैलाई आफ्नो पहिरन असुहाउँदो लागेपछि हिनताबोध हुन्छ । आत्माविश्वास हराउँछ । ‘अरुले केही भन्लान् कि ?’ यस्तो आशंकाले मनमा ग्लानी पैदा हुन्छ । भनौं, असुहाउँदो पहिरनले मानसिक तनाव दिन्छ ।
यस्तो समस्या दुई कारणले हुन्छ । एक त आफ्नो ज्यान नै असुहाउँदो हुँदा । अर्को, पहिरनको उचित छनौट गर्न नसक्दा ।
ज्यान अर्थात शरीर भनेको प्राकृतिक कुरा भयो । यसको लम्बाई, चौडाई मिलाउन गाह्रै हुन्छ । मिलाउने भनेको पहिरन नै हो । तर, कसरी मिलाउने ?
यसको पनि काइदा छ । शरीर चाहे मोटो होस् वा पातलो । अग्लो होस् वा होचो । यी चिन्ताको विषय होइन । बरु आफ्नो ज्यान अनुरुप कसरी पहिरन छनौट गर्ने र कसरी लगाउने भन्ने कुरा मूख्य हो । फेसनविज्ञहरु भन्छन्, ‘शरीर अनुसार सुहाउँदो पहिरन छनौट गर्न सक्नुपर्छ, जस्तोसुकै शरीरमा आकर्षक देखिन्छ ।’
अहिले जमना स्लिमको छ । झट्ट हेर्दा छरितो र फूर्तिलो देखिने । फेसनविज्ञहरुले पहिरनकै काटछाँट मिलाएर स्लिम देखिने उपाय पनि सुझाएका छन् । के हो त ति उपाय ?
कसरी देखिने स्लिम ?
महिलाहरु प्राय स्लिम देखिन चाहन्छन् । स्लिम देखिनकै लागि विभिन्न उपाय अपनाउने गर्छन् । त्यही चक्करमा कोही जिम जान्छन् त कोही डाइटिङ तिर लाग्छन् । कतिपय विहान विहान खाली पेटमा कागती पानी सेवनतिर लाग्छन् त कोही दिनमा ५-७ कप ग्रीन टीको सेवन गरेरै भएपनि आफूलाई स्लिम देखाउनतिर लाग्छन् ।
जबकी साधारण तरिका अपनाएर पनि आफूले आफूलाई फिट तथा स्लिम देखाउन सकिन्छ । यसको लागि कुनै ठूलो कसरत पनि गर्नु पर्दैन । आफ्नो लागि केवल दुई मिनेट छुट्याउन जरुरी छ । किनकी हामीसित यस्ता थुप्रै काइदा छन्, जसको प्रयोगद्धारा दुई मिनेट भित्रमा नै आफूलाई स्लिम देखाउन सकिन्छ ।
आरामदायी जुत्ता छनोट गर्ने
शरीरलाई स्लिम तथा आकर्षक देखाउन जुत्ताको ठूलो भूमिका रहन्छ । सही जुत्ताको छनोटले मान्छे अग्लो देखिनुका साथै शरीर स्लिम देखिन्छ । त्यसका लागि जुत्ताको छनोट गर्दा छालाको रङ्ग अनुसार जुत्ता छान्नु पर्छ । त्यस्तै, हल्का खैरो, खरानी, न्युड तथा छाला अनुसारको रङ्ग पनि उपर्युक्त विकल्प हुनसक्छ ।
जुत्ताको प्रयोग गर्दा प्यान्टमा पनि विशेष ध्यान दिनु पर्छ । यस्ता जुत्तासित प्यान्ट वा टाइट्स प्रयोग गर्दा एकअर्कासित मिल्ने कलर प्रयोग गर्नु पर्छ । यसले दृष्टि भ्रम कायम गर्छ । र, व्यक्तिको उचाई पहिलेको भन्दा केही इन्च अग्लो भएजस्तो महसुस हुने गर्छ ।
जबकी कुनै पनि जुत्ता प्रयोग गर्दा एंकल स्ट्राप वाला जुत्ताको प्रयोग नगरेकै बेस हुन्छ । किनभने यस्ता जुत्ताको प्रयोगले मान्छे अग्लो देखिनुको सट्टा झन् होचो देखाउन सक्छ ।
लुगामा विशेष ध्यान दिने
स्लिम देखिनका लागि लुगामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । लुगा खरीद साइजमा ठूलो वा सानो लुगा छनोट गर्नु हुँदैन । किनकी यस्ता लुगााले शरीरलाई ढाक्नुको सट्टा उजागर गरी शरीर मोटो देखाउँछ । त्यसैले, प्रत्येक पल्ट लुगा खरीद गर्दा आफ्नो शरीरलाई ध्यानमा राखेर उचित साइजको लुगा खरीद गर्नु पर्दछ । यसले व्यक्तित्व आर्कषक बनाउनुका साथै स्लिम देखाउन मद्दत गर्छ ।
ढाड सिधा राख्ने
शरीरलाई आर्कषक तथा स्लिम देखाउन शरीरको मुद्रा (पोस्चर)को पनि ठूलो भूमिका हुन्छ । विशेषगरी, यस्ता मुद्राले मानिसको शान बढ्नुका साथै कम्मरको साइज पनि सानो देखिने गर्छ । जबकी अल्छी मुद्रामा बस्दा वा अढेर लागेर बस्दा शरीरको बनावट सानो देखिनुका साथै मोटो मात्र देखिदैन । स्वास्थ्य सम्बन्धि विभिन्न समस्या समेत निम्तिने गर्छ ।
परिरेखा (कन्टावरिङ) ले अनुहारलाई सानो देखाउनुका साथै चिउँडो डबल देखिने समस्यालाई लुकाउन मद्दत गर्छ । त्यसको लागि गाढा र हल्का रङ्गको टोन कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने जान्न आवश्यक छ । यसको प्रयोग गर्ने सबैभन्दा सरल उपाय भनेकै आफूलाई लुकाउन मनलागेको भाग सबै गाढा बनाउनु हो । र, जुन सुकै भाग देखाउन चाहनुहुन्छ, त्यसलाई हाईलाइट गर्नु हो ।
यसको लागि यसको प्रयोग गर्ने तरीका जान्न आवश्यक छ । यसको लागि सबैभन्दा पहिले हाईलाइटरको प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यसपछि गाढा रङ्गको कन्टावरले बाँकी भाग छोप्नु पर्छ । त्यसरी कन्टावर प्रयोग गर्दा एउटा कुरा विर्सनु हुँदैन की अनुहारको किनारा अदृश्य हुनु पर्दछ । अनुहारमा जहिले पनि सावधानीका साथ ब्राइट मेकअप प्रयोग गर्नु पर्छ । उदाहरणका लागि, रातो लिपस्टिकले चिउडो तथा बंगाराको लाइनलाई हाइलाइट बनाउन सहायता प्रदान गर्छ ।
छालाको रङ हल्का वा गाढा बनाउने
छाला जति ट्यान भयो, छालाको अतिरिक्त पाउण्ड उत्ति नै कम देखिने गर्छ । र, छालालाई ट्यान देखाउने राम्रो विकल्प भनेको ब्रोञ्जरको प्रयोग हो । त्यसबाहेक यी सरल उपायद्धारा पनि छालालाई ट्यान बनाउन सकिन्छ ।
यसको लागि सबैभन्दा पहिले छालालाई सफा गर्ने र, मोइस्चराईजर क्रिमको प्रयोगद्धारा छालालाई मोइस्चराईज राख्ने ।
यदी छाला सुख्खा छ भने स्क्रबको सट्टा स्पञ्जको प्रयोग गर्ने । र, पटक पटक छालालाई मोइस्चराईज गर्ने । साथै, घुँडा र कुइनामा विशेष ध्यान दिने ।
सही कपडाको छनोट
कुनै पनि लुगा छनोट गर्दा त्यसमा प्रयोग गरिएको कपडामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । कमसल सामग्री प्रयोग गरिएको कपडाले शरीर भद्दा देखाउँछ । त्यस्तै, कसिलो लुगा लगाउँदा व्यक्ति मोटो देखिन्छ ।
यसबाहेक कपडाको छनोट गर्दा चारपाटे तथा जिक ज्याक आकारको लुगा प्रयोग गर्नबाट बच्नु पर्छ । किनकी यस्ता लुगाले शरीरको ढाक्नु पर्ने भागलाई छोप्नुको सट्टा झनै उजागर गर्दछ । जबकी लचिलो तथा सललल बग्ने कपडाले शरीरलाई राम्ररी कभर गर्नुका साथै शरीरलाई स्लीम देखाउन सहायता प्रदान गर्छ ।
सही वस्तुको प्रयोग
कसिलो स्कार्फ तथा कछुवाको जस्तो घाँटी भएको लुगा सम्पूर्ण शरीरलाई नै प्रभावित पार्ने गर्छ । जबकी हल्का किसिमको स्र्काफलाई त्यसै छोड्न वा बेल्टको मुनी अड्काउन सकिन्छ । गोलो वा ‘भी’ आकारको गला सबैभन्दा राम्रो विकल्प मानिन्छ । कुनै पनि लुगाको प्रयोग गर्दा गलाको दुई तीनवटा टाक खोलेरमात्र लुगा लगाउनु पर्दछ ।
अनाश्यक भागमा बेसी ध्यान नदिने
कहिलेकाही आफूलाई राम्रो नलागेको शरीरको भाग लुकाउनमा मानिसहरु बढी समय खर्चन्छन् । यसले समस्या कम हुनुको साटो समस्या भएको अंग अझ बढी हाइलाइट हुने गर्दछ ।
उदाहरणको लागि कसैलाई आफ्नो हिप मन पर्दैन भने ठूल्ठूला पकेट भएका वा कुनै प्रिन्ट भएको जीन्सको प्रयोग गर्नु हुँदैन । किनकी हिपलाई जति कम ध्यान दियो,त्यसमा मानिसको आँखा पर्ने सम्भावना पनि उत्ति नै कम हुने गर्छ ।
हेयर ड्रेसरसित परार्मश गर्ने
विशाल तथा उठेको कपालले लुक्समा परिवर्तन ल्याउन सक्छ । त्यसैले कपाल काट्दा जहिले पनि आˆनो पहिरण तथा शरीरको बनोटलाई ध्यानमा राखेर कपाल काट्नु पर्छ । कपाल काट्दा मध्यम तथा कुभ लम्बाईको कपाल काट्न सकिन्छ । छोटो कपाल त्यतिबेला मात्र राम्रो देखिन्छ, जबसम्म कपालले गर्दन छोप्छ ।
त्यस्तै, लामो तथा सिधा कपाल मोटो मान्छेलाई सुहाउँदैन । यस्तो हेयर स्टाइलले समस्याग्रस्त क्षेत्रलाई उजागर गर्छ ।
शरीरलाई स्लिम देखाउन सेपवेयर तथा स्लिम वेल्टको प्रयोग आजकल ‘आम’ मानिन्छ । सेपवेयर तथा स्लिम बेल्टको प्रयोगले शरीर स्लिम तथा फिट देखिन्छ । र, जस्तोसुकै लुगामा पनि आर्कषक देखाउन सहायता प्रदान गर्छ ।
यस्ता वेल्टको प्रयोग मोटो मान्छेका लागि मात्र नभएर दुब्लो मान्छेका लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । विशेषगरी, पेटको वोसो कम गर्न तथा हिपको साइज कम गर्न पनि सेपवेयरको प्रयोग निकै आर्कषक मानिन्छ । तर यस्ता सेववेयरको प्रयोग विशेष अवसरमा प्रयोग गर्नु वुद्धिमानी हुन्छ ।
प्रकाशित मिति : शनिबार, पुस २१, २०७५ , ५:२५ बजे
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम ८० प्रतिशतभन्दा धेरै सकियो, भनेकै समयमा हुनेछ परीक्षण उडान
मान्छेले किन आत्महत्या गर्छ ?
इतिहासको कथा र गाथाले बन्दैन देश
डेंगुबारेका भ्रम र सत्य : मेवाका पात खाएर, अलैची चुसेर निको हुन्न डेंगु, निको पार्न यसो गर्नुस्
डेंगु ज्वरोबाट बच्न आफै सुरक्षित बनौं, यस्ता छन् बच्ने उपाय